Daraasad muujisay in kaneecadu u gudbin karto dullinka Zika ugxaanteeda - iftineducation.com
Daraasad muujisay in kaneecadu u gudbin karto dullinka Zika ugxaanteeda
aadan21 / August 31, 2016
iftineducation.com – Kaneecada dheddigga ah ayaa dullin sidaha cudurka Zika u gudbin kareysa ugxaanteeda iyo dhallaankeeda.
Kaasi maahan warkeena balse waa daraasad ay samaysay Jaamacada Texas. Daraasada ayaa intaa raacisay in dilitaanka kaneecada waaweyn aysan wax weyn soo kordhinayn.
Cilmibaareyaal ayaa arinkaa wax ka yiri shalayto Isniintii. Jaamacadaa cilmibaareyaal ka tirsan ayaa markaa damacsanaa inay arkaan bal in kaneecada dheddigga ah ay sida cudurka dengue ama qandhada jaalaha ah (yellow fever) feyraska ugu gudbin karto ukumaheeda.
Marka waxay ku mudeen dullinka Zika kaneeco. Asbuuc kadib ugxaan ayay dhaleen waxaana dullinkii laga helay hal 290kiiba.
“Buufintu waxay dhimeysaa gudbinta laakiin meesha dullinka kama saareyso.” Sidaa ayay dheheen.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay in Zika uu yahay xaalad dagdag ah oo caafimaad maadaama uu saamayn karo carruurta uurka kujira maskaxdooda iyo lafahooda madaxa.
Zika waxaa gudbisa kaneecada galmadana waa lagu kala qaadaa. Haweenka uurka leh iyo raggooda ayaa waxaa laga codsanayaa inaysan u safrin tobanaan dal oo badankoodu ku yaala Caribbean-ka iyo Latin America ama Koofur Ameerika halkaa oo uu haatan dullinka Zika ku badan yahay.
wasmo tii ugu macanayd
qofka i jecel maxaan ku garan.karaa